Obsidian volamena, antsoina koa hoe obsidia volamena volamena, video sheen, video
Volondomanitra volamena, antsoina koa hoe obsidian volamena volamena na obsidia sheen dia vato iray misy modely vita amin'ny gazy mandavantaona, tavela avy amin'ny lava-dranomasina, nilahatra niaraka tamin'ny sosona noforonina raha vao nidina ny vatolampy. Ireo mibontsina ireo dia miteraka fiantraikany mahaliana toy ny volon-bolamena.
Ny Obsidian dia trondro vulkanika voajanahary natsangana ho toy ny vatolampy mahatsiravina.
Izy io dia vokarina rehefa avy any anaty volkano ny lava-pavy avy any anaty volkano iray izay mangatsiaka haingana miaraka amin'ny fitomboana kristaly kely. Hita matetika ao anatin'ilay lava lava rhyolitik lava antsoina hoe arina obsidian, izay ahitana ny zavatra simika, votoaty silika avo dia miteraka fahitana avo be, izay rehefa avy mangatsiaka haingana dia mamoaka vera voajanahary amin'ny lava-bato. Ny fampiatoana ny fihanaky ny atiny amin'ny alàlan'ny lava-be ity dia manazava ny tsy fisian'ny fitomboan'ny kristaly. Miorina, marefo ary amorphous ny obsidian, noho izany dia mivadika amin'ny sisiny maranitra mihitsy. Taloha dia nampiasaina hanamboarana fitaovana manapaka sy manindrona izy io ary nampiasaina fanandramana ho toy ny fofona-menaka scalpel fandidiana.
Toy ny mineraly
Tsy mineraly tena izy, satria toy ny fitaratra dia tsy kristaly, ankoatra izany, ny antonony dia miova be loatra ka azo sokajiana ho mineraly. Voasokajy indraindray ho mineraloida. Na dia maizina matetika aza ny obsidian, mitovy amin'ny vatolampy mafic toy ny basalt, ny firafitry ny obsidian dia tena felsic. Ny Obsidian dia miompana amin'ny SiO2, silika dioksida, mazàna 70% na mihoatra. Ny vatolampy crystalline izay misy ny fitambanan'i obsidian dia ahitana granita sy rhyolite. Satria azo tsapain-tanana amin'ny mason-tany ny obsidian, rehefa mandeha ny fotoana dia lasa kristaly voaaro faran'izay tsara ny vera, tsy hita ny obsidian izay tranainy noho ny vanim-potoana Cretaceous. Vaky ny fisian'ny rano io fihodinan'ny obsidian ity. Ny fananana rano ambany dia rehefa mavesatra ny rano, mazàna latsaky ny 1% amin'ny lanjany, dia lasa mihena tsikelikely ny obsidian rehefa tratry ny rano ambanin'ny tany.
Zava-bita volamena volamena
Vidio ny vatosoa voajanahary ao amin'ny fivarotana
Tags Gold, Golden, safira
Tags Obsidian, Bohabohan'orampanala